Sumcadda sawirka: Lorie Shaull / Flickr
Qeybta:General11 min akhris
2020 dib u eegis: Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga soo qaatay sanad taariikhi ah
2020 waxay u badan tahay in marwalba laxasuusto sidii sanadkii lagu soo daayay carqaladeyn aan horay loo arag oo ka dhacday dalkeena hooyo iyo aduunka oo dhan. Iyada oo ay jirto masiibo aad u xun, xisaab xisaabeed xanuun badan, iyo wareegii doorashada Mareykanka ee muranka ka taagnaa, waxaan u mahadcelineynaa dhammaan dadkii xilligan la kulmay rajo iyo geesinimo. Halkan waxaa ah xoogaa muhiim ah oo laga soo qaatay sanad taariikhi ah.
Jawaab Degdeg ah oo loogu talagalay Faafitaanka Fayraska
Weerarka degdegga ah ee aafada faafa ayaa si toos ah u xoojineysa diiradeena waxa aan ku heyno.
McKnight, waxaan qiimeyneynaa sharafnimada sayniska iyo shaqada cilmi baarayaasha, saraakiisha caafimaadka bulshada, iyo jawaab bixiyaasha caafimaadka. Waxaan qiimeynaa sinnaanta, oo aan ka fikirnaa in Covid-19 uu si aan kala sooc lahayn u saameynayo beelo gaar ah. Waxaanan qiimeyneynaa ka mid noqoshada, taas oo macnaheedu yahay inaan diidno dadaal kasta oo aan ugu adeegsaneyno caqabadan caafimaad ee bulshada si aan u takoorno ama aan u abuurno kala qeybin.
Intii lagu gudajiray aafada, waxaan mudnaanta siinay ladnaanta shaqaalaheena, la-hawlgalayaashayada, iyo bulshada maxalliga ah iyo tan caalamiga ah. Waqtigaani waa xilli la isu yimaado, in la aqoonsado isku tiirsanaanta qotada dheer, iyo in la daryeelo midba midka kale.
Jawaabta McKnight ee faafida waxaa loogu talagalay baahiyaha mustaqbalka dhow iyo kan fog. Waxaan ku bixinay dabacsanaanta shuruudaha warbixinta deeqda; waxay ugu deeqday lacag dheeri ah baahiyaha faafa; ku biiriyay bayaano ku saabsan midnimada bulshada wajahaysa nacaybka neceb; waxayna la shaqeeyeen iskaashi lala yeesho ururada si toos ah loo taageero ururada aan macaash doonka ahayn iyo bulshooyinka wax ka qabta saameynta xun ee Covid-19.
Eeg Boggeena Jawaabta 'Covid-19'
Codka jamhuuriyadda soomaaliyaCodka jamhuuriyadda soomaaliya
Waqtiyada aan la hubin, waxay noqoneysaa xitaa muhiim in la raadiyo baro dhalaalaya. Sannadkii 2020, waxaan ka helnay baro dhalaalaya wada-hawlgalayaashayada bulshada ee cajiibka ah, oo aan ku soo bandhignay baraha bulshada iyo ololaha websaydhka oo aannu ugu yeedhnay #brightspot. Xaaladaha halista ah ee cudurkan faafa, waxay sii wadaan inay helaan hababkii ugu hal abuurka badnaa uguna saamaynta badnaa ee loogu adeegi lahaa bulshadeena. Qaraxyadan hal-abuurnimada ah iyo ficillada wadajirka aadanaha ayaa ina dhiirrigelinaya.
FIIRO DIIWAANAD BADAN
Istaag Loogu Talo Galay Sinaanta Jinsiyada
Sinnaanta ayaa ah qiimaha aasaasiga ah ee aasaaska 'McKnight Foundation'. Dilkii macno darrada ahaa ee Mr. George Floyd ee Maajo 25, 2020 wuxuu noo keenay xittaa go'aan aad u ballaaran annaga oo ku dabaqi doonna deeq-siintayada iyo maal-gashigeenna si aan ugu horumarinno sinnaan, loo dhan yahay Minnesota iyo taageeridda nidaamyo macno leh oo isbeddela si ay dhammaan u wada kobcaan.
Waxaa noo dheer bayaan u gaar ah, si sharaf leh ayaan ugu biirnay Wadajirka 'Philanthropic Collective' si loola Dagaallamo Madowga iyo Looga Hortago Cadaaladda Midab-kala-sooca- isbahaysi aasaasi ah iyo ururo samafal oo ku baaqay in wax laga beddelo dhinaca hay'ad samafal. Wadajirka ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu soo uruuriyo $25 milyan si loogu maalgaliyo Sanduuqa Dhaqdhaqaaqa Madow.
Akhriso Bayaankayaga Dadweynaha
Riixitaanka Dimoqraadiyad Wakiilo Dheeraad ah
Xoojinta ka-qaybgalka dimuqraadiyadda waa aag shaqo oo cusub oo loogu talagalay McKnight - istiraatiijiyad ay wadaagaan beelaheena cusub ee firfircoon & sinnaanta iyo barnaamijyada Cimilada & Tamarta ee Midwest. Iyada oo loo marayo barnaamijyadan iyo guud ahaan aasaaska, waxaan higsaneynaa in aan kordhino kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka oo dhan iyo awooda lagu dhisayo awooda, ku lug lahaanshaha dadka kala duwan horumarinta horumarka barwaaqada aan wadaageyno, iyo in la abuuro barxado ka qeybgal ballaaran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada iyo go'aamada go'aamiya mustaqbalkeena wadajirka ah.
Intii lagu gudajiray sanad doorasho adag, McKnight wuxuu ku biiray bulshada samafalka ee Minnesota, oo uu hogaaminayo Golaha Minnesota ee aasaaska, taageerida dimoqraadiyada iyo daacadnimada howlaha doorashada. Bayaanka ayaa lagu caddeeyay mabda'a ah in dimuqraadiyadda dhabta ah, codbixin kasta ay muhiim tahay. Waxay sidoo kale ku baaqday nabad, midnimo, iyo bogsiin.
Akhriso Bayaanka MCF
La kulan Madaxweynaha cusub ee McKnight
Bishii Diseembar, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Tonya Allen ay hoggaamin doonto Aasaaska madaxweynenimo, laga bilaabo Maarso 1, 2021. Allen wuxuu u yimid McKnight oo ah hoggaamiye caan ku ah samafalka, markii ugu dambeysayna wuxuu ahaa madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Skillman Foundation ee Detroit. Iyadoo loo diyaariyay cutubkeeda soo socda, Foundation waxay u aragtaa iyada inay si sax ah u tahay qofkii saxda ahaa ee hoggaanka qaban kara inta lagu jiro waqtigan taariikhiga ah. Intii lagu gudajiray masiibo caalami ah, xisaabinta jinsiyadaha qaranka, iyo dhibaatada cimilada, hoggaanka geesinimada leh iyo aragtida fog ee Allen ayaa dardargelin doona horumarka McKnight ee wax ka qabashada qarnigan dhibaatooyinka ugu adag uguna deg degsan.
"Tonya waa hoggaamiye firfircoon oo hal-abuur leh oo ku dhisaya xoogga taariikhda dheer ee McKnight, qiyamkiisa, iyo deeq-bixinta," ayuu yiri Noa Staryk, guddoomiyaha guddiga McKnight. "Daacadnimadeeda, quruxdeeda, iyo rikoorkeeda la caddeeyay, waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa Tonya oo ah hoggaamiye lagu kalsoon yahay, karti leh, saameyn leh oo himiladeenna horay u sii wadi doona."
Akhriso Bioya's Bio
Koox Cusub oo ah Maamulayaasha Barnaamijka
Sannadkii 2020, McKnight wuxuu soo dhoweeyey dhowr xubnood oo cusub oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan laba agaasimeyaal barnaamij, wuxuuna ku dhawaaqay xulashada agaasimaha barnaamijka saddexaad.
David Nicholson wuxuu ku biiray kooxda Vibrant & Equitable Communities isagoo ah agaasimaha barnaamijka. Nicholson wuxuu keenaa in kabadan 30 sano oo hogaamineed oo aan macaash doon ahayn, dowladnimo, iyo samafal, ugu dambeyntiina wuxuu aasaaska kahelay hay'adda Headwaters Foundation for Justice.
Horaantii, Soo Baxayaasha DeAnna ku soo biiray agaasimaha barnaamijka Fanka, kaas oo taageera farshaxanleyda shaqeeya si loo abuuro bulshooyin firfircoon waxayna aaminsan yihiin in Minnesota ay ku naalooneyso marka fannaaniintoodu barwaaqoobaan. Waxay horay u hogaamisay Farshaxanka Juxtaposition.
Bishii Diseembar, waxaan ku dhawaaqnay xulashada Sarah Christiansen sida agaasimaha barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta. Hogaamiye samafal xilliyeed ku takhasusay cimilada, waxay ku biiraysaa McKnight oo ka socda Solidago Foundation. Waxay kormeeri doontaa ballaarin ballaaran oo ku saabsan ballanqaadkeena cimilada.
Sannadku wuxuu keenay saaxiibo dhowr ah oo qiimo leh, oo ay ka mid yihiin: Nichol Higdon madaxweyne ku xigeenka maaliyadda iyo howlaha; Paula Vasquez Alzate, maamulaha kooxda barnaamijka; Robyn Browning, barnaamijka iyo deeqaha lashaqeeya; Kelsey Johnson, maamulaha kooxda barnaamijka; iyo Phoebe Larson, maareeyaha isgaarsiinta.
Waxaan sidoo kale xulnay seddex xubnood oo cusub oo kooxda ka tirsan waaxda maaliyadda iyo howlaha, oo ay ka mid tahay Jenna Dahlberg, maareeyaha maaliyadda; Tony Lusiba, agaasimaha IT; iyo Amanda Williams, agaasimaha HR. Waxay nagu soo biireen sanadkan.
Wax ka qabashada Caqabadaha ugu daran ee Jiilkeena
Bishii Sebtember, waxaan bilownay wareegii koowaad ee deeq-lacageedka cusub Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (V&EC) barnaamijka iyo balaadhinta Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijka. Tilmaamaha cusub ee deeqaha iyo istaraatiijiyadaha istiraatiijiyadda ayaa ka yimid ka 2019-2020 Qaab dhismeedka Istaraatiijiyadeed, taas oo horseeday kuweena ku dhawaaqid sanad ka hor in McKnight uu sii xoojin doono ballanqaadkiisa ku aaddan horumarinta xalalka cimilada iyo dhisidda mid loo siman yahay oo loo wada dhan yahay oo loo yaqaan Minnesota. In ka badan sidii hore, labadan caqabadood waxay nagu qasbayaan inaan ku jawaabno deg-degga iyo agabyada ay damaanad-qaadayaan, iyo male-awaalka iyo geesinimada ay u baahan yihiin. Labadan barnaamij waxay noqon doonaan qoondayntayada deeqaha ugu badan.
Kahor wareegiisii maaliyadeed ee ugu horreeyay Oktoobar, barnaamijka V&EC wuxuu marti-geliyay macluumaad webinar, oo ay kasooqeybgaleen 375 qof oo kakala socday ururo kaladuwan oo gobolka oo dhan ah. Waxay horseeday abuurid dhammaystiran Su'aalaha, taas oo ka jawaabeysa su'aalaha guud ee codsadayaasha mustaqbalka. Markii la dhammeeyo wareegii ugu horreeyay ee maalgelinta, kooxdu way wadaagtay barashada hore.
Bishii Ogosto, waxaan ku faraxsanahay inaan ku darno kuwayaga taageerada shacabka aragtida himilada Xcel Energy ee ah in 1.5 milyan oo baabuur koronto ah wadada la saaro sannadka 2030. Dadaalku wuxuu siin doonaa reer Minnesota shidaal iyo koronto muhiim ah waxayna yareyn doontaa wasakheynta gobolkeenna. McKnight sidoo kale wuxuu u dabaaldegay daabacaadda Nadiifi Baabuurta Minnesota xukuma Hay'adda Xakamaynta Wasakhda Minnesota bishii Diseembar. Sanadihii oo dhan, Mu'asasadu waxay taageertay kooxo dhowr ah iyo isbahaysiyo u horseeday ololahan muhiimka ah. Haddii la dhaqan galiyo sanadka 2021, qaanuunka wuxuu yareynayaa qiiqa dabada laga sii daayo ee cusub, oo ay ugu horreyso gawaarida shidaalka ku shaqeysa iyo kuwa xamuulka qaada ee fud-fudud waxayna kordhin doontaa tirada gawaarida korontada iibka ah, iyadoo si weyn hoos ugu dhigeysa hawo iyo wasakheynta cimilada gobolkayaga.
Farshaxanada Midabka Marxaladda Xarunta
Kahor xayiraadaha Covid inta aysan ku dhicin bulshada farshaxanka, halkan waxaa ku yaal muuqaal ka socda soosaarkii Tiyaatarka Penumbra ee Ballad of Emmett Till (2014). Sumcadda sawirka: Toddobaadka Allan
Marka la eego saameynta Covid-19 ee qaybta farshaxanka iyo dhaqanka, McKnight wuxuu ku biiray Ford Foundation isagoo ugu yaraan $10 milyan ugu deeqaya ururada farshaxanka ee Madow, Dadka Asaliga ah, iyo dadka midabka (BIPOC) ee Minnesota. McKnight wuxuu aqoonsan doonaa dadka qaata deeqaha sida "Qasnadaha Dhaqanka Mareykanka" si loo aqoonsado loona sharfo kala duwanaanta muujinta iyo heer sare ee Minnesota ee taariikhi ahaan aqoonsi la'aan iyo agab la'aan.
Barnaamijku sidoo kale wuxuu soo dhoweeyay fasal cusub oo ah Saaxiibada Fanaaniinta, loo dabaaldegay Marcie Rendon sida ku guuleystaha Abaalmarinta Farshaxanka ee 2020, oo la shaqeeyay iskaashiga Saint Paul & Minnesota Foundation si loogu soo bandhigo farshaxanka bulshada BIPOC gallery online.
Sidee Cilmiga cilmiga beeraha u horumariyaa sinaanta aduunka iyo xalka cimilada
McKnight's Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada wuxuu u shaqeeyaa si loo hubiyo adduunyo ay dhammaantood heli karaan cunno nafaqo leh oo ay si joogto ah u soo saaraan dadka maxalliga ah. Barnaamijku wuxuu taageeraa cilmi baarista nidaamyada agroecological ee 10 dal oo wajahaya cunno yari ba'an oo ka jirta Afrika iyo Koonfurta Ameerika. Beeraha ayaa ka mid ahaa qeybihii ugu horeeyay ee dareemay saameynta isbadalka deegaanka ee aduunka, iyadoo beeraleyda yar yar ay ka mid yihiin kuwa ugu daran. Barnaamijka cilmi-baarista dalaggu wuxuu ka caawiyaa wax ka qabashada arrimaha cimilada degdegga ah iyadoo maalgelinaysa cilmi-baarista xalalka cilmiga beeraha iyadoo, iyadoo, iyo beeraleyda yaryar.
Covid-19 ayaa sii xumaysay sinaan la'aanta adduunka sii, gaar ahaan meelaha leh kaabayaasha caafimaadka ee liita waxayna carqaladeeyeen suuqyada cuntada. Hase yeeshe, waxaan sidoo kale ka maqalnay saynisyahanno badan oo wax badan u huray inay karantiil ku sameeyaan shaybaararadooda cilmi baarista ayna la qabsadaan xaaladaha cusub.
Si loogu biiro dadaalka caalamiga ah ee looga hortagayo faafida fayraska, shaqaalaha barnaamijka dalagga waxay sameeyeen isbedelo dhowr ah, oo ay ku wadaageen tan warqad furan deeq bixiyaasha. Tan waxaa ka mid ahaa u wareejinta bulshada kaalmooyinka kaalmooyinka kaalmooyinka ka caawiya dhinaca barnaamijyada la taaban karo iyo garab istaagga cilmi-baarayaasha maaddaama lagu qasbay inay gaaraan go'aanno caqli-gal ah oo dheellitiraya caafimaadka bulshada iyo nabadgelyada.
Neuroscientists Waxay La Kulmaan Caqabadaha Sanadka
Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu taageeraa cilmi baarista hal-abuurka ah iyada oo loo marayo seddex abaalmarin sanadle ah oo tartan ah oo raadinaya baarayaasha cilmi-baaristoodu muujineyso ballan-qaad ah in bulshada loo soo dhoweynayo ka-hortagga, daaweynta, iyo daaweynta cudurrada maskaxda ee ba'an.
Qeyb kasta waxay sameyn kartaa waxbadan si ay ucaawiso kala duwanaanshaha, sinaanta, iyo kaqeyb galka, oo ay kujiraan sayniska. Maaddaama wax ka yar 8% ee saynisyahannada Mareykanka ay ka yimaadeen asalka jinsiyado aan metelin, guddiga Sanduuqa Dhaqaalaha iyo guddiyaduba waxay ka shaqeynayeen sidii loo hubin lahaa in saynisyahanno badan oo midab leh ay codsadaan oo ay helaan abaalmarinta McKnight Neuroscience. Intaas waxaa sii dheer, guddiga agaasimayaasha waxay soo saareen barnaamij cusub xagaagii lasoo dhaafay si loogu furo fursado badan ardayda kulleejada neerfaha ee ka soo jeeda beelaha aan metelin.
Muuqaal kale oo laga helay 2020 ayaa ah in ugu yaraan laba ka mid ah McKnight maal-galiyayaasha neerfaha ay cilmi baaris muhiim ah ka wadeen Covid-19. Loren Looger, PhD, oo ah McKnight Technological Innovation in Neuroscience Awards xubin ka tirsan guddiga, wuxuu adeegsanayaa aqoontiisa qotada dheer ee borotiinka si uu si gaar ah uga shaqeeyo horumarinta tijaabooyinka Covid-19. Feng Zhang, PhD, abaalmarinta McKnight Neuroscience Tech, iyo kooxdiisa soo saaray hal saac oo guriga ah nooc tijaabo ah oo ah 'Covid-19' loogu talagalay ogaanshaha hore iyo xakameynta.
Waxbadan Ka Baro MAAL-GELINTA MAQAALKA
Markaynu dib u milicsanno sannadkan la soo dhaafay, waxaa na dhiirrigeliyay adkaysiga wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha ah iyo bulshooyinka, waxaanan u mahad-naqaynaa dhammaan kuwa dadaalay dadaalkooda isla markaana u kacay sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha adag.
Gudaha ereyada madaxweynaheena imanaya, Tonya Allen, “2020 waxay ahayd sanad aan la mid ahayn. Dhamaanteen waan aragnay carqaladeyn badan. Dhamaanteen waxaan aragnay naxdin badan. Runtiina si daacadnimo ah, inbadan oo naga mid ah ayaa sidoo kale aragnay dhimasho. Laakiin marka carqalad jirto, fursad ayaa jirta. Markay naxdin jirto, waxaa jiri doonta farxad. Markay dhimatana waxaad filan kartaa dhalasho cusub. ”
Waxaan rajeyneynaa 2021 sidii sanad cusub oo bilow ah maadaama aan si wada jir ah uga shaqeyno sidii loo hormarin lahaa mustaqbal cadaalad, hal abuur iyo mustaqbal badan leh!
Abaalmarinta Teknolojiyadda 2021 ee McKnight